Creative anaghị agba nchara mkpọchi uwe style ọla imewe
Mkpọchi uwe na ọtụtụ-eji kwa ụbọchị ndụ nke uwe akpa, na mmebe ga-eji mkpọchi uwe dị ka isiokwu na ike a classic ọla style.now anyị ụlọ ọrụ forcehold ga-ewebata a haziri dị ka n'okpuru. Mkpọchi uwe usoro nke ngwa na-ma n'ibu na steampunk. Ha nwere ike na-eyi na ...
Nti metal ngwaahịa imewe
Igwe anaghị agba nchara bụ ụdị metal ihe ọtụtụ-eji mmepụta na ndụ. Ọ bụkwa a na-ewu ewu ihe onwunwe na ulo oru imewe. Na ụlọ ọrụ, igwe anaghị agba nchara na ọtụtụ-eji. Taa, e nwere ihe karịrị otu narị dị iche iche nke ulo oru igwe anaghị agba ígwè. Na maara otú ịba ọgaranya na ndị anaghị agba nchara des ...
Ngwa nke seramiiki Njirimara ke imewe na imewe nke ọla
Efere jewelery bụ a pụrụ iche ọhụrụ ụdị jewelery. N'ihi na nke akwụkwọ udi na ike plasticity, ọ na-adọta ndị mmadụ anya na ya pụrụ iche apịtị asụsụ na gbazere agba, na-aga n'ihu omenala aka-mere poselin usoro nke 72. Karịsịa, na amara nke ọkụ bụ irreplacea ...
Noble nketa, European Enamel nkà ịrụ tinye agba jewelery
Mgbe ọ na-abịa ịrụ, ọ bụghị ike na-eche na nke oké ọnụ nche na jewelery na Europe. The yi agba ma mara udidi enye a otutu ohere maka imewe na creativity maka ndị na-emepụta nke ezi nche na jewelery. Ma, olee ihe craft? Gịnị mere a pụrụ ikesa ekesa for ...
Customization, ọkọnọ yinye management, ọrụ n'ichepụta ... ndị Keywords na-akọwa ọhụrụ n'ichepụta
The anọ ulo oru mgbanwe na-anabata ụwa. Nnukwu ihe dị iche n'etiti ya na aga ulo oru mgbanwe bụ data-chụpụrụ. Nke a na ụdị data dabeere intelligentization eweta mgbanwe n'ichepụta bụghị nanị mma nke mmepụta arụmọrụ, kamakwa traditiona ...
Ezinaụlọ metal ngwaahịa imewe na nkedo usoro nhazi ọkwa
N'ihi na ụfọdụ akụkụ na mgbagwoju shapes, mgbatị na-emekarị na-eji. Metal mgbatị bụ a usoro nke a metal na-smelted n'ime a mmiri mmiri na-ezukọ ụfọdụ a chọrọ na wụsara n'ime a ebu, na mma, sikwuo ike, na kpochara nweta a mgbatị enwe a gaghị agara udi, size, na arụmọrụ. T ...
Creative anaghị agba nchara mkpọchi uwe style onye Juu ...